७० वर्षपछि कम्युनिस्ट शासन – DK
Home / राजनीति / ७० वर्षपछि कम्युनिस्ट शासन
७० वर्षपछि कम्युनिस्ट शासन
By Digital Khabar on April 22, 2019
७० वर्षको लामो यात्रा पूरा गरेपछि बल्ल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशमा कम्युनिस्ट सरकार बनाउन सफल भएको छ, त्यो पनि दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ।
एकआध देशबाहेक कम्युनिस्टको यस्तो बलियो सरकार कही बनेको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य उपलब्धिको रूपमा लिएका छन् । आज नेताहरुले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस मनाइरहँदा विश्वको मानचित्रमा नेपाल कम्युनिस्ट देशको रूपमा दर्ज भइसकेको छ ।
यद्यपि अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको लक्ष्य पूरा नभएको भन्दै अलग अलग समूहमा रहेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
देशमा कम्युनिस्टको दुई सरकार तथा दुई नम्बर प्रदेशबाहेक छवटा प्रदेशमा बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै जनवादी क्रान्ति पूरा नभएको भन्दै मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले छुट्टा छुट्टै सङ्घर्ष गरिरहेको छ भने सीपी मैनाली, विश्वभक्त दुलाल, मोहन विक्रम सिंह, डा. बाबुराम भट्टराई, गोपाल किराँती, नारायणमान विजुक्छेहरुले अझै पनि कम्युनिस्टको नाममा छुट्टा छुट्टै समूह बनाएर सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
तत्कालीन राणा सरकारको विरोधमा जनतालाई उतार्न तथा मुलुकमा सामाजिक रूपान्तरण र जागरणका लागि पुष्पलाल श्रेष्ठको अगुवाइमा २००६ वैशाख ९ गते ७० वर्षअघि भारतको कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो ।
‘पहाड, पर्वत, खोलानाला जग्गाजमिन सबको, मालिक हामी दास बनौँ किन हिस्सा सबमा सबको’ भन्ने उद्घोषका साथ सन् १९४९ सेप्टेम्बर १५ मा पहिलो घोषणा–पत्र जारी गरिएको थियो । लोक जनवादी नेपालको निर्माण गर्ने सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी नेपाली क्रान्तिको दिशा पार्टीले अवलम्बन गरेको थियो ।
कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको चार वर्षपछि २०१० मा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भयो । सो महाधिवेशनबाट मनमोहन अधिकारी महासचिवमा निर्वाचित भएका थिए । २०१४ मा दोस्रो महाधिवेशन भयो । महाधिवेशनमा पुष्पलाल श्रेष्ठले संविधानसभा र संसदीय प्रजातन्त्रको प्रस्ताव, शम्भुराम श्रेष्ठले गणतन्त्रको प्रस्ताव, रायमाझीले संवैधानिक राजतन्त्रको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर महाधिवेशनमा पुष्पलालको संविधानसभाका लागि सङ्घर्ष गर्ने प्रस्ताव पास भयो तर बहुमतको निर्णयले केशरजङ्ग रायमाझीलाई महामन्त्री बनायो ।
तर उनी सुरुदेखि दरबार निकट रहेका हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीमा धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन र उनले नै पहिलो पटक २०१७ साल पार्टी विभाजन गरे ।
२०१७ साल पुस १ गते जब तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिएर निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हाल्दा रायमाझीले स्वागत गरेका थिए । पुष्पलाल, मोहनविक्रम सिंह र तुलसीलाल अमात्य र मनमोहन अधिकारी रायमाझीको विपक्षमा थिए ।
प्रचण्ड कसको पक्षमा ?
त्यतिबेलै पूर्व मेची कोशी प्रान्तीय कमिटी र रायमाझी गरी दुईवटा समूह बनेको थियो । त्यसपछि २०२५ सालमा पार्टी पुनः विभाजन भयो । कम्युनिस्टबाट नै २०२८ सालमा झापा जिल्ला कमिटी र केन्द्रीय न्युक्लियस गरी दुईटा समूह बन्यो । एउटाको नेतृत्व सीपी मैनालीले गरेका थिए भने अर्कोको नेतृत्व मोहनविक्रम सिंहले गरेका थिए । हुँदाहुँदै २०३८ सालमा रायमाझी समूह पनि विभाजन भयो । त्यतिबेलासम्म पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कुनै धारमा नभए पनि पुष्पलालसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो । तर उनी मोहनविक्रम सिंहको चौथो महाधिवेशनमा गए ।
मनमोहनको छुट्टै पार्टी
यता झापाको विद्रोही समूहले आफ्नो पार्टीलाई परिमार्जन गर्दै अखिल नेपाल को–अर्डिनेसन कमिटी बनाएको थियो । यही समूह मिलेर २०३५ मा सीपी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा (माले) बनायो । २०३६ सालमा मनमोहन अधिकारीले गठन गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मनमोहन) बाट जनमत सङ्ग्रहमा बहुमतको पक्षमा उभिए तर त्यतिबेला गठन भएको मालेले जनमत सङ्ग्रह नै बहिष्कार गर्यो । पुष्पलालको निधनपछि उनको समूहलाई सम्हाल्दै आएका बलराम उपाध्याय र साहना प्रधानले २०४३ सालमा मनमोहन अधिकारीको पार्टीसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) बनाए ।
२०४६ को जनआन्दोलनमा मनमोहन सिंह नेतृत्वको पार्टी र सीपी मैनालीको मालेसहित अन्य साना समूह मिलेर संयुक्त वाम मोर्चा गठन भएको थियो ।
जनआन्दोलनले पञ्चायती शासनको अन्त्य गरेपछि मनमोहन सिंह र सीपी मैनालीको पार्टीबीच एकता भयो । एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बन्यो र त्यसको महासचिव मदन भण्डारी भए । २०५० जेठ ३ गते मदन भण्डारीको निधनपछि माधवकुमार नेपाल महासचिव बने । महाकाली सन्धिलाई लिएर पार्टीमा विवाद हुँदा वामदेव गौतमले २०५४ सालमा पार्टी फुटाएर सीपी मैनालीसँग मिलेर माले खोले । पछि वामदेव गौतम एमालेमै फर्के ।
यता २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहलाई लिएर मोहनविक्रम सिंहको चौथो महाधिवेशन पनि विभाजन भयो । त्यसबाट निर्माण लामा निस्केर नेकपा (चौम) गठन गर्नुभयो । मोहनविक्रम सिंहको साथमा रहेका प्रचण्डले उनको क्रियाकलापलाई कहिल्यै रुचाएनन् ।
उनले मोहनविक्रमका बारेमा पटक पटक पार्टीमा कुरा उठाउनुभएको थियो । २०४१ सालको पाँचौँ महाधिवेशनबाट मोहन वैद्य (किरण) महामन्त्री भए ।
प्रचण्ड महामन्त्री र सशस्त्र आन्दोलन
पछि सो पार्टीबाट मोहनविक्रम सिंह नै अलग भए । मोहन वैद्यले नेकपा मसाल बनाए र मोहनविक्रमले मोटो मसाल बनाए । २०४५ सालमा नेकपा मसालले प्रचण्डलाई महामन्त्री बनायो । बहुदलपछि प्रचण्डको पार्टी नेकपाले मसाल, निर्मल लामाको पार्टी नेकपा चौम, सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन र रूपलाल विश्वकर्माको समूह मिलेर नेकपा (एकता केन्द्र) बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
एकताको दुई वर्ष नबित्दै सशस्त्र युद्धको विषयलाई लिएर सो पार्टीमा मतभेद सुरु भएको थियो । त्यही मतभेदका कारण २०५१ मा निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अमिक शेरचन, लीलामणि पोख्रेललागयतले नेकपा (एकताकेन्द्र) गठन गरेका थिए ।
पछि प्रचण्डले पार्टीको नामसँग माओवादी जोडेर सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गरे । जनयुद्ध चलिरहेकै बेला २०५९ सालमा मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नकेपा मसाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा एकता केन्द्रबीच एकता भयो । तर त्यो पार्टी धेरै दिनसम्म एकसाथ रहन सकेन । २०६३ सालमा फेरि विभाजित भयो ।
एउटा समूहले एमालेको संसदीय व्यवस्थालाई समर्थन गरेको थियो भने अर्को समूहले माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनलाई रोजेको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठको समूह एकीकरण गर्यो भने चित्रबहादुर केसी, साध्यबाहदुर भण्डारी, सीपी मैनाली, मोहन विक्रम सिंहहरु अलग अलग समूह बनाएर बसे ।
पछि संसदीय व्यवस्थालाई लिएर माओवादीबाट मोहन वैद्य अलग भए । त्यसपछि, मातृका यादव, मणि थापा, डा. बाबुराम भट्टराई, त्यसपछि नेत्रविक्रम चन्द्र, आहुती, गोपाल किराँती अलग भएर छुट्टा छुट्टै पार्टी सञ्चालन गरे । पछि मातृका यादव र मणि थापाले माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गरे । त्यसबाहेकका अन्य समूहहरु अझै क्रियाशील छन् ।
← Previous Story संसार हल्लाउने लेनिन को हुन् ?
Next Story → सुजुकी मेगा एक्सचेञ्ज मेला सुरु, १५ देखि ३० हजारसम्म छुट मिल्ने
रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा कलाकारको पत्रकार सम्मेलन, कसले के भने ?
अमेजन जङ्गलमा डढेलोको रौद्र रुप, नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन
digitalkhabar | August 24, 2019
आईजीपी खनालले भेटे रवि लामिछाने
जल्दैछ पृथ्वीको ‘फोक्सो’ – जिम्मेवार हामी मानिस हौँ !
digitalkhabar | August 23, 2019
गुगलले तोड्यो परम्परा, एन्ड्रोइड क्यू को साटो एन्ड्रोइड १०
पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा ‘युट्युब ट्रायल’ को अभ्यास
Digital Khabar | August 23, 2019
राजतन्त्र फाले पनि राजतन्त्रात्मक प्रवृत्ति फाल्न सकिएनः प्रदीप पौडेल
रसुवागढीमा कन्टेनर डिब्बा जलेर नष्ट
कास्मिर समस्या समाधानमा भूमिका खेल्न नेपाललाई पाकिस्तानको आग्रह
‘ए मेरो हजुर ४’को तयारीमा झरना र सुहाना ?
पाकिस्तानसँग वार्ता गर्न मोदीलाई फ्रान्सका राष्ट्रपतिको आग्रह
हृदयघातबाट बच्न मुटुका यस्ता उपचार हुन्छन् नेपालमा